China Rotary Drilling Rig KR50 ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စက်ရုံ TYSIM ပုံကိရိယာ
အဓိက winch ဆွဲအင်အား
အရန် winch ဆွဲအင်အား
အဓိက winch မြန်နှုန်း
၄၈ m / min
min ။ gyration ၏အချင်းဝက်
TYSIM မှတီထွင်ထားသော KR50 နှင့် KR40 အလှည့်ကျသောတူးစက်ငယ်များ။ ၄ င်းတို့သည်ဆန်းသစ်သောမှတ်တိုင်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ လှည့်စက်ကိုလျင်မြန်စွာပြုပြင်ခြင်းအတွက်အထူးအသုံးပြုထားသော Modular rotary drilling machines ။
ဒီမော်ဒယ်၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီဇိုင်းသည် ၈-၃၀ တန်အဆင့်ရှိတူးဖော်သူများ၏ကိုယ်ထည်ပါ ၀ င်သောအသေးစားတူးဖော်သည့်စက်များကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း။
KR50 ပူးတွဲမှုအတွက်ပြုပြင်ထားသောကိုယ်ထည်အား ၁၅-၃၀ တန်တူးဖော်သောကိုယ်ထည်အဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်အမြင့်ဆုံးတူးဖော်သည့်အတိမ်အနက်သည် ၁၆-၂၄ မီတာ၊ အမြင့်ဆုံးတူးဖော်ခြင်းအချင်းသည် ၁၂၀၀ မီတာမီတာဖြစ်သည်။
၁ ။ undercarriage ----- ရွေးချယ်မှုအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော & ရင့်ကျက်သောတူးဖော်သူ
အမျိုးအစား: အသစ် & အသုံး
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: CAT, JCM, SINOMACH, SANY, XCMG နှင့်အခြား
2. ဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများ ----- ကမ္ဘာ့ကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်
အဓိကပန့်နှင့်အဆို့ရှင် - တင်သွင်းသောကဝါဆာကီ (ဂျပန်)
3. ဖွဲ့စည်းပုံအစိတ်အပိုင်းများ ----- XCMG အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအစိတ်အပိုင်းများပေးသူ
တူးတွင်း၏ 4. ကြီးမားသောအချင်း
၆။ ဤပုံစံသည်သင်စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သင်၌တူးဖော်သူတစ် ဦး ရှိပါကပူးတွဲပါကိုသာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး၎င်းကိုသေးငယ်သည့်အလှည့်တူးစင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောစက်ရုံများကိုကျွမ်းကျင်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
၂။ သင်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပါ။ သင်၏တူးဖော်သည့်မော်ဒယ်နှင့်အညီသင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏ KR40,50 သေးငယ်သည့်အလှည့်တူးသည့်တူးစင်များကိုရုရှား၊ သြစတြေးလျ၊ ထိုင်း၊ ဇမ်ဘီယာနှင့်အခြားနိုင်ငံ ၂၀ ကျော်သို့ရောင်းချခဲ့သည်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Sany, XCMG, LIUGONG, CAT, KOMATSU, SUMITOMO, HYUNDAI, KOBELCO, JCB စသည်ဖြင့်တူးဖော်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၁၀ ခုကျော်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးပြီ။
Q1: Rotary Drilling Rig Attachment ၏အာမခံချက်ကဘာလဲ။
Rotary Drilling Rig Attachment အတွက်အာမခံကာလသည်နှစ်ဝက် (သို့) အလုပ်ချိန် ၁၀၀၀ ဖြစ်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပထမဆုံးလျှောက်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး အား ၇ ရက်ကြာအခမဲ့လမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည်။ သင်လေယာဉ်လက်မှတ်နှင့်တည်းခိုခန်းများသာဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ Rotary Drilling Rig KR40
နောက်တစ်ခု: Rotary Drilling Rig KR60A
ဟိုက်ဒရောလစ်ပုံ Breaker KP450S